Origami ho an'ny ankizy - Ahoana ny fomba hanaovana alika taratasy, tsikelikely | Asa tanana
Irene Gil | | asa-tanana, Asa tanana taratasy, Asa-tanana ho an'ny ankizy, Asa-tanana sy fitaovana
Ao amin'io tutorial andao hianatra ny teknika origami natokana ho an'ny ankizy, mba hahafahan'izy ireo manomboka amin'ny asa haingana sy mora. Izany dia hanomboka hanandrana ny teknika ireo kely noho ny fahazoana ny asany voalohany nefa tsy dia misy olana.
Ny teknika origami dia ahitana ny famoronana tarehimarika amin'ny taratasy aforeto misesy.
Hanao ny alika taratasy Mazava ho azy fa mila iray ianao takelaka taratasy. Amin'ity tranga ity, ahoana no fomba hamoronana endrika a alika, Tena tsara raha ilay loko tadiavinao ny alika. Tsy maintsy misy ny lelany Square, ary ny habe dia hiankina amin'ny halehiben'ny alikao.
Ianao koa dia mila a marika mainty hitaona ny maso sy ny orona.
Hanao ny alika taratasy Atombohy amin'ny fametrahana ny ravina miaraka amin'ny zorony ambony, ambany ary hatrany amin'ny sisiny. Izany hoe, miendrika rombo. Aforeto eo amin'ny antsasany hatrany ambony ka hatrany ambany no manatevin-daharana ny zoro ary mamorona telozoro.
Andao hanao ny salohim-bary. Tsy maintsy aforeto ny zorony amin'ny sisiny ary avelao hidina ny tampony, araka ny hitanao amin'ireto sary manaraka ireto.
Ny ampahany mivalona dia triangles izany dia hamorona sofina alika.
Fotoana izao hanaovana ny orony Ny alika. Mba hanaovana izany dia aforeto ny tampony avy eo ambany ka avelao hisosotra ny fotony. Aforeto kely fotsiny, mba tsy ho telozoro lehibe loatra.
Mijanona fotsiny izany amin'ny a penina loko mainty no itarihanao ny orona eo amin'ny vavan'ny moncot. Ny maso eo afovoan'ny tarehy, izay ho atody roa na faribolana roa.
Araka ny hitanao dia tsotra be izy io. Avy amin'ny 3 taona afaka manao ny alikany avy ny ankizy origami. Tsy mila mampiasa hety na zavatra mampidi-doza azy ireo izy ireo. Omeo ihany koa izy ireo hisafidy ny lokon'ny taratasy hahafahan'izy ireo manao azy ireo amin'ny loko izay tiany indrindra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Asa tanana » asa-tanana » Origami ho an'ny ankizy - Alika taratasy an-dàlana
Fomba fanamboarana biby tototry ny saka sy ondana